Ny kristianisma eto Madagasikara dia iray amin'ireo fivavahana arahin'ny mponin'i Madagasikara, indrindra ny Malagasy, ankoatry ny fivavahan-drazana sy ny finoana silamo sy ny hafa koa. Ny 41%n'ny Malagasy dia Kristiana, araka ny tatitry ny US Departement of State tamin'ny taona 2011. Hita avokoa ireo sampan'ny fivavahana kristiana toy ny Fiangonana nohavaozina sy ny Fiangonana loterana sy ny Fiangonana katolika sy y Fiangonana adventista sy ireo Fiangonana evanjelika tsy mitsaha-mihamaro. Miezaka ny hampitombo isa ny fiangonany ny Ortodoksa sy ny Anglikana sy ny hafa koa. Tamin'ny taona 1963 hatramin'ny 2004 dia niisa 72 ny "fikambanana ara-pinoana" voasoratra ao amin'ny lisitra ofisialy tanan'ny fanjakana malagasy. Manodidina ny 200 any ho any ny isan'ny karazam-piangonana eto Madagasikara tamin'ny taona 2020, ka ny ankamaroan'ireo dia fiangonana vao niorina taty afara, dia ireo fiangonana evanjelika na ara-pilazantsara sy pentekôtista.
1.2.2 Fitomboan'ny isan'ny antokom-pivavahana kristiana
Tantaran'ny Kristianisma eto MadagasikaraHanova
Fidiran'ny fivavahana kristianaHanova
Ny fanenjehana ny fivavahana kristianaHanova
Ny protestantisma lasa fivavaham-panjakanaHanova
Fidiran'ny fivavahana katôlikaHanova
Fahazoan'ny Katôlika vahanaHanova
Fitomboan'ny isan'ny antokom-pivavahana kristianaHanova
Tonga teto Madagasikara ny misionera adventista tamin'ny taona 1926 ary tafaorina teto Madagasikra ny Fiangonana adventista tamin'ny taona 1927. Tamin'ny taona 1930 dia tafaorina teto Madagasikara koa ny Fiangonana ôrtôdôksa. Efa nahatsangana ny sinôdany ny fiangonana anglikana tamin’ny taona 1937.
Fanafahana an'i MadagasikaraHanova
Taorian'ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena koa no nandraisan'ny Malagasy ny fitantanana feno ny fiangonana na dia tsy afa-niala tamin'ny fanohanana avy any ivelany izany fiangonana izany. Nahazo fahaleovan-tena tamin'ny taona 1950 ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM). Tamin'ny taona 1968 dia tonga fiangonana iray nomena ny anarana hoe Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ny fikambanan'ny fiangonana telo nohavaozina, dia ny Fiangonana Frenjy Malagasy (FFM) sy ny Fiangonana ara-Pilazantsara eto Madagasika (FPM) ary ny Fiangonan'i Kristy eto Madagasikara (FKM). Niforona koa ny fiangonana anglikana, dia ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) tamin’ny taona 1969.
Fivavahana kristiana sy kômonismaHanova
Tamin'ny vanim-potona nanjakan'ny firehana ara-pôlitika kômonista tamin'ny firenena maro dia nisy ny tsy fankasitrahan'ny mpitondra fanjakana ny fivahana kristiana teto Madagasikara.
Taorian'ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena, indrindra fa teo amin'ireo taona 1990, no nanombohan'ny fiangonana evanjelika sy pentekôtista maro niditra teto Madagasikara
Fandraisan'anjaran'ny Fiangonana amin'ny raharaham-pirenenaHanova
Ankehitriny dia mandray anjara lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fivavahana kristiana, na amin'ny lafiny sôsialy na amin'ny fanabeazana na ara-pôlitika, ary tsy manavaka saranga na fiaviana ny fidirana ho mpikambana amin'ny antokom-pinoana izatsy na izaroa.
Ireo antokom-pinoana kristiana misy eto MadagasikaraHanova
Ny katôlisisma sy ny ôrtôdôksia ary ny anglikanismaHanova
Ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina eto Madagasikara, izay niorina tamin' ny taona 1857, dia isan' ny fiangonana katôlika maneran-tany izay eo ambany fitarihana ara-panahin'ny Papa ao Rôma. Fivavahana voalohany eto Madagasikara ny Fiangonana katôlika raha ny habetsahan' ny mpino no jerena, izay maherin' ny 4.000.000 any ho any, izany hoe manakaiky ny iray ampahefatry ny mponin' ny Nosy. Marie Immaculée Conception à Andohalo.
Ny Fiangonana ôrtôdoksaHanova
Ny fiangonana ôrtôdôksa eto Madagasikara dia isan'ny fiangonana tatsinanana efa tafasaraka tamin'ny fiangonana katôlika tany aloha. Fehin'ny Fiangonana Ôrtôdôksan'i Aleksandria sy Afrika manontolo izy. Tamin'ny taona 1930 no niorina voalohany teto Madagasikara ny fiangonana ôrtôdôksa.
Ny anglikanisma eto Madagasikara dia hita amin'ny alalan'ny Eklesia Episkopaly Malagasy, hafohezina amin'ny hoe EEM. Miombona ao amin'ny Firaisambe anglikana na Fiombonam-be anglikana (Anglican Communion) izay mampifandray ny Anglikana maneran-tany ny EEM. Azo lazaina ho niorina tamin'ny taona 1864 na 1969 ny EEM.
Ny prôtestantisma dia efa tonga teto Madagasikara tamin'ny vanim-potoana faha mpanjaka. Ny prôtestantisma eto Madagasikara dia misy fiangonana maro ka ny roa voalohany tonga teto Madagasikara dia ny loteranisma sy ny kalvinisma. Ny 25%n'ny Malagasy dia Prôtestanta.
Ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), dia fiangonana kristiana prôtestanta vokatry ny fitoriana ny Filazantsara nataon'ireo misionera avy tamin'ny Misiona Norveziana (anglisy: Norwegian Missionary Society - NMS) nanomboka ny taona 1866 sy ny Misiona Amerikana (Americana Lutheran Church - ALC) nanomboka tamin'ny taona 1888. Tao Betafo no niorina ny trano fiangonana loterana voalohany teto Madagasikara. Tamin'ny taona 1950 anefa vao nahazo fahaleovan-tena io fiangonana io ary tamin'io koa no niantsoana azy amin'ny hoe FLM.
- ny Fiangonana Loterana Malagasy Nohavaozina (FLMN) izay nisitaka tamin'y FLM tany amin'ireo taona 70 noho ny tsy fankasitrahana ny rafi-pitantanana fa tsy noho ny foto-pampianarana tsy mitovy; io no fiangonana loterana fantatra indrindra manaraka ny FLM. Matanjaka io fiangonana io ao amin'ny distrikan'Antanifotsy sy ao Antanarnaivo. Ahitana azy koa ny any Toliara sy any Mahanoro.
- ny Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana Malagasy (FFPLM) naorin'ilay mpiandry atao hoe Neny Olga. Ao Anolaka any Fianarantsoa no misy ny foibeny.
Ny kalvinisma na nohavaozinaHanova
- ny Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antranobiriky (FMTA) dia fiangonana avy amin'ny London Missionary Society (LMS) tamin'ny taona 1894 izay niala noho ny tsy fifanarahana nisy tamin'ny pastora malagasy sy ny misionera anglisy izay nihevitra azy ireo ho mpanampy fotsiny ihany. Ny pastora Rajaonary no nitantana an'io fiangonana voalohany.
- ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara (FPVM) dia fiangonana niala avy amin'ny FJKM noho ny tsy fitoviam-pomba fijery ny amin'ny asam-pifohazana. Tamin'ny taona 2002 no nanorenan'ny mpitandrina Randrianantoandro Jean Joseph azy io
Ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara dia fiangonana kristiana niorina tamin'ny taona 1927. Misionera avy ao amin'ny nosy Maorisy no nitondra ny adventisma teto Madagasikara tamin'ny taona 1910. Notokanana ny fiangonana voalohany tao Manjakaray ny 27 Aogositra 1927. Mihoatra ny 76 000 ny Malagasy adventista izay manana trano fiangonana mihoatry ny 1200.
Ny evanjelisma sy ny pentekôtisma ary ny karismatikaHanova
Betsaka ireo fiangonana niorina taorian'ireo fiangonana voalaza anarana etsy ambony, izay samy mikarakara ny ara-panahin'ny Malagasy sy ny mponina eto Madagasikara ka ny ankamaroany dia ao amin'ny atao hoe evanjelisma sy ny pentekôtisma ary ny karismatika. Tsy mitsaha-mitombo isa ireo fiangonana ireo. Maro amin'izy ireo no matetika lazaina amin'ny anarana hoe "fiangonana zandriny".
Ireo fantatra indrindra:Hanova
Ireto manaraka ireto koa no tsy dia be mpahalalaHanova
Ny Vavolombelon'i Jehovah sy ny Olomasin'ny Andro FaranyHanova
Ireto fiangonana roa ireto no tsy azoazon'ny ankamaroan'ny Kristiana hafa indrinra noho ny finoan'izy ireo betsaka zavatra tsy itoviany amin'ny finoana sy fampianaran'ny fiangonana mahazatra ny Malagasy. Izany no ilazan'ireo fiangonana tranainy azy ireo tsy amim-pihambahambana hoe "sekta".
Ny Vavolombelon'i JehovahHanova
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro FaranyHanova
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany, niorina tamin'ny taona 1993. Fantatry ny Malagasy amin'ny anarana hoe Fiangonana Môrmôna ity fiangonana ity. Razanaparany Ramiandrisoa no nitondra ny môrmônisma teto Madagasikara tamin'ny taona 1989. Efa Tamin'ny taona 1990 no nananganana ny fiangonana nefa tamin'ny taona 1993 vao voaorina ara-panjakana ny izany fiangonana izany ka Razanapanala Ramiandrisoa no lasa filohany. Amin'ny Olomasin'ny Andro Farany dia Andriamanitra samy hafa nefa miara-miasa ny Ray sy ny Zanaka ary ny FanahyMasina.
Ny ekiomenisma eto MadagasikaraHanova
Ireo fiangonana ao amin'ny FFKMHanova
Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina (EKAR), niorina tamin'ny taona 1857;
Ny FJKM sy ny FLM dia mikambana ao amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM) amin'ny maha fiangonana samy prôtestanta sady nateraky ny reformasiona azy ireo. Ny Fiangonana anglikana (EEM) anefa tsy ao anatin'io fiombonana io sady tsy tena fantatra loatra ho prôtestanta raha eto Madagasikara na dia tsy voatery ho izany ny zava-misy any ivelany (Jereo: Anglikanisma).
Ny traikefa efa azoHanova
Ny ekiomenisma eo amin'ireo fiangonana kristiana eto Madagasikara dia ahitana ny fiaraha-mivavaka amin'ny fotoana sasantsasany eo amin'ny fiangonana maromaro, ka ny lohany amin'izany dia ireo ao amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara izay fikambanan'ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina sy ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ary ny Eklesia Episkopaly Malagasy, izay niorina tamin'ny taona 1980.
Izany ekiomenisma izany dia miseho amin'ny alalan'ny fanaovana fivavaka iraisam-pinoana amin'ny fotoana voatondro sasany. Tsy mijanona amin'ny lafiny ara-pivavahana ihany ny ekiomenisma malahasy fa miitatra amin'ny fiaraha-mikaon-doha amin'ny famahana ny olana ara-sôsialy sy ny disadisa ara-pôlitika misy eto Madagasikara. Endrika isehoan'ny ekiomenisma koa ny tsy famerenana manao batisa na batemy ny mpino mifindra finoana avy amin'ny fiangonana iray mankamin'ny fiangonana iray hafa samy mpiombona. Iraisany ireo fiekem-pinoana ekiomenika, ny vavaka nampianarin'ny Tompo, ny hira sasany izay efa nahavitany boky (Miara-mizotra). Efa nisy koa fandikan-teny ny Baiboly niraisan'ireo fiangonana mpikambana ireo, dia ny Baiboly Dikan-teny Iombonana Eto Madagasikara (DIEM) izay ezahana vakina amlin'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana.
Tsy mbola voakasiky ny ekiomenisma amin'ny fomba lalina koa ny lafiny ara-teolojia (tenim-pinoana, foto-pampianarana, sns) izay ahitana fahasamihafam-pinoana sarotra aravina, indrindra eo amin'ny Katôlika sy ny Prôtestanta. Ny FLM sy ny FJKM, izay samy prôtestanta, no afaka mampifanakaiky ny teôlôjiany noho ny fampianaram-pinoany tsy mifanalavitra firy vokatry ny maha samy fiangonana nateraky ny reformasiona. Tsy mboka miara-mandray eokaristia na fanasan'ny Tompo, izay marika hita maso ankoatry ny batisa na batemy sady sakramenta roa tokony hiraisan'ny fiangonana mpiombona, ny Kristiana ao amin'ny FFKM. Tsy mbola mifampiditra alitara ny mpitondra fiangonana na dia efa afaka mifampiditra trano fiangonana sy mifampindrana polipitra aza. Na dia efa misy aza ilay Baiboly DIEM dia maro ny mpitondra fivavahana mampiasa ny Baibolin'ny fiangonany amin'ny fotoana anaovana fivavahana iraisam-pinoana.
Ny kristianisma sy ny finoana hafa eto MadagasikaraHanova
Ny kristianisma sy ny fivavahan-drazana malagasyHanova
↑ 3,0 3,1 3,2 et 3,3 Les dieux au service du peuple p.94
↑ 4,0 et 4,1 Les dieux au service du peuple - p. 108
↑ 6,0 et 6,1 Les dieux au service du peuple - p.93
↑ 8,0 8,1 et 8,2 Les dieux au service du peuple - p. 101.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristianisma_eto_Madagasikara&oldid=998488"
Dernière modification le 15 Novambra 2020, à 09:04
Voaova farany tamin'ny 15 Novambra 2020 amin'ny 09:04 ity pejy ity.